Home News Canada oo Soomaalida ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax ah + Sababta
Canada oo Soomaalida ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax ah + Sababta
Mas’uuliyiinta hayada u adeegta bulshada Soomaalida oo ka dhisan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa sheegay in ay la fajaceen go’aan ay waax ka tirsan dowladda ugu diidday dhaqaale loogu talagalay, kaddib markii ay ku tilmaantay in Soomaalidu aysan ahayn madow sax ah, sida uu shaaciyay telefishinka CBC.
“Maanta xilligan uu adduunka marayo in wax noocaas oo kale ah lala kulmo waa arrin aad iyo aad iyo aad looga naxo,” ayuu yidhi Maxamuud Xaaji Aadan oo ka mid ah aasaaseyaasha hayadda Soomaalida caawisa ee dhaqaalaha loo diiday.
“Dadka go’aannadan ay kasoo baxeen ama waxay kasoo jeedaan duni kale ama kama tirsana bulshada madowga ah,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Waxay hayaddooda ka mid ahayd boqollaal hayadood oo dowladda Canada ay codsigooda dhaqaale ku gacan seyrtay maadaama ay kasoo bixi waayeen shuruudihii looga baahnaa.
Sidoo kale Agaasimaha hayaddan Soomaalida caawisa, Cabdirisaaq Karod, oo bartamihii sanadkii hore codsiga dhaqaalaha u gudbiyay xafiiska dowladda ee bixiya kharashka lagu hormariyo bulshooyinka madowga ah ee dalkaas, ayaa sheegay in uu marnaba aamini waayay jawaabta diidmada ah ee lagu soo celiyay iyo sababta loo cuskaday toona.
Lacagta ay dalbadeen ayuu sheegay in dadka lagu caawiyo loogu iibiyo qalabka shaqada – sida kumbuyuutarrada – sidoo kalena loogu fuliyo adeegyo kale oo aasaasi ah.
Previous articleLabo dhalinyaro oo ku geeriyootay bada Hobyo
Next articleCiidamada Ethiopia oo kufsi ka geestay Gobolka Tigreey
Ex Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Marxalada Uu Haatan Dalka...
Aqriso:-Beelaha ay kasoo kala Jeedaan Taliyayaasha Maanta Magacaabay Madaxweyne farmaajo!!